ल्हारक्याल लामाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं,३० वैशाख । एकिकृत माओवादीका सा‌ंसद ल्हारक्याल लामालाई अख्तियारले ९ करोड विगो र त्यति नै जरिवाना सहित कानुन बमोजिम कैदसजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको थियो । सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो कमाइ २० करोड बराबर रहेको उल्लेख गरेका ल्यारकालस‌ंग २९ करोड ७८ लाख १४ […]
कसरी बने बिल गेट्स संंसारको धनी व्यक्ति ?
काठमाडौं, २९ वैशाख । डर त्यस्तो चिज हो, जसले कयौं पटक हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिदिन्छ । तपाईं एक सक्षम र सवल व्यवसायी बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यही डरले तपाईंलाई रोकिदिएको हुन्छ । हामी तपाईंलाई मनमा हुने यस्तै १० डरको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, यस्तै डरहरुका कारण मानिस व्यापार र व्यवसाय गर्न पाउदैनन् वा सक्दैनन् । यी […]
काठमाडौ, २८ बैशाख । साताको पहिलो दुई दिन दोहोरो अंकले बढेको पूँजीबजारमा मंगलबार १.१४ अंकको झिनो बढोत्तरी भए पनि कारोबार रकम भने एकअर्ब माथि पुगेको छ । नेप्से परिसूचक १४८४.०४ को नयाँ विन्दूमा पुगेको छ । बिमा समूह चम्किँदा बजार उक्लिएको हो । उत्पादनमूलक समूह, होटल समूहको नेप्से परिसूचक पनि उक्लिएको छ । वाणिज्य बैंक […]
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी
काठमाडौँ, २७ वैशाख । आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ । कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउने गरी छलफल अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थमन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको तलब न्युनतम १० देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले अघिल्लो २ वर्ष निजामती कर्मचारीको तलव बृद्धि गरेको थिएन । […]
सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ कर बुझायो ,एनसेलले
काठमाडौं,२६ वैशाख । सरकारलाई कर नतिरेपछि चौतर्फी दबाबको सामाना गरेको सूचना प्रदायक कम्पनी एनसेलले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापत नौं अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको जनाईएको छ । एनसेलले शुक्रबार एभरेष्ट बैंकमा सारेको रकम आइतबार सरकारी कोषमा बुझाएको छ । एनसेलले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन सुरु गर्दै शुक्रबार […]
सेयर बजारमा सवा १० अर्बको हकप्रद सेयर भित्रने
सेयर बजारमा केही महिना भित्रै सवा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर भित्रने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेको आवेदनअनुसार सवा १० अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन हुन लागेको हो । बोर्डमा विभिन्न समूहका ३४ वटा कम्पनीले १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (१० करोड २८ लाख कित्ता) बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका […]
छिमेकी लघुवित्त विकास बैंकको प्रगति
काठमाडौं, २१ वैशाख । छिमेकी लघुवित्त विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा कमालको प्रगति हासिल गरेको छ । यो बैंकले ७१.२६ प्रतिशतले खूद नाफामा वृद्धि गर्दै कमालको प्रगति हासिल गरेको हो । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार यो बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको खूद नाफा चालु आ.ब.मा […]
७३ जिल्लाका लागि ५ सय कृषि प्राविधिक माग
काठमाडौं, २० वैशाख । कृषि प्राविधिक बिषय पढेर पनि बेरोजगार हुनेहरुका लागि जागिरको सुवर्ण अवसर ! नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले करार सेवामा रही काम गर्ने गरी कृषि प्राविधिक पदमा ५ सय जनशक्ति माग गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को ‘एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिक’ […]
सुन तोलाको ५७ हजार
काठमाडौ, १९ बैशाख । नेपाली बजारमा सुनको भाउले २५ महिनाको रेकर्डलाई तोड्दै आइतबार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । २०७० साल चैतमा सुनको भाउ तोलाको ५५ हजार ८ सय थियो । त्यसपछि गत फागुन १४ गते तोलाको ५६ हजार ५ सयमा कारोबार भएर रेकर्ड कायम भएको सुनको भाउ शुक्रबार सोही विन्दूमा आइपुगेको थियो । २०७० साल […]
आइएमई र क्योदाई रेमिटेन्सको घर जाने हर्ष’ योजना जित्ने श्रेष्ठले टिकेट बुझे
काठमाडौं,१७ बैशाख । आइएमई र क्योदाई रेमिटेन्सको घर जाने हर्ष’ योजना अन्तर्गतको पहिलो हप्ताका विजेताले नेपाल आउने टिकेट बुझेका छन् । योजनाका प्रथम विजेता कान्साइको क्योटोमा अध्यनरत बिजय श्रेष्ठले क्योदाइ रेमिटेन्स ओसाकाको नामबास्थित कार्यालयमा नेपाल आउने जाने टिकेट बुझेका छन् । टिकेट परेको अवधिबाट एक वर्षभित्र आफ्नो सुविधाअनुसार मिति तय गरेर आवत-जावत गर्न पाउने व्यवस्था […]